राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक टेबुल « Farakkon
राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक टेबुल
प्रकाशित मिति : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार
काठमाडौं, असोज ८ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुई विधेयक टेबुल गरिएको छ। बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ टेबुल गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले उक्त दुई विधेयक पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। नयाँ बजेटका आश्रित यी दुई विधेयकलाई पनि राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि सङ्घीय संसद्बाट बजेट पारित हुन्छ। विनियोजन विधेयक २०७८ लाई भने राष्ट्रियसभाबाट बिहीबार नै पारित भएको थियो।
आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विनियोजन विधेयक २०७८ प्रमाणीकरण गरी पठाइएको प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका हुन्।
आजको बैठक पनि सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० का सांसदले उभिएर विरोध जनाएकाले अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद खिमलाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिनुभएकामा उनले सदाझैँ आज पनि आफूहरुको विरोध कायमै रहेकाले बैठकको कामकारबाही अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रियसभाको आजको पहिलो बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।
स्कार्पियोको ठक्करबाट साइकलमा सवार एक जनाको मृत्यु, अर्का घाइते
तुलसीपुरको सुरक्षा प्रभाबकारी बनाउने बारे मेयर र डिएसपीका बीचमा छलफल
काटेको धान बालिमा अबिरल बर्षाले ठूलो क्षति
नुवाकोटको किस्पाङमा बस दुर्घटना, ३० जना घाइते
चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रचण्डको प्रस्ताव
पर्सि बुधबारसम्म पानी पर्ने सम्भावना
युवाको आक्रमणबाट प्रहरी सहायक निरिक्षकका तीन दाँच भाँचिए, थप ६ प्रहरीपनि घाइते
दाङमा चोरी गरेको आशंकामा दश जना पक्राउ
तुलसीपुरमा एउटै घरमा बस्ने पाँच परिवारको कोठाबाट चोरी
‘घुस काण्ड’मा मुछिएका तुलसीपुरका तीन घुमुवाको काज सरुवा
यी हुन, मुगु बस दूर्घटनामा ज्यान गुमाउने ३२ जना (नाम ठेगानासहित)
दाङमा दशैंको दिन मापसे चेकजाँच ः ५० जना बढी पक्राउ
सगरमाथा सिमेन्ट प्रयोग गरि घर बनाउँदा दूई हप्तासम्म ढलान नै सेट भएन
सापकोटाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि हमालको टिम उत्साहित
तुलसीपुरमा सुरेश हमालले १६० मतअन्तरले अनिल कार्कीलाई हराए
जोखिम मोलेर अमेरिका जान खोजेका नेपालीसहित १ सय २६ जनाको ग्वाटेमालाबाट उद्धार
नेता डाक्टर र डाक्टर नेता बन्न खोज्दा अस्पतालमा समस्या भयो – मन्त्री इन्द्रजित थारु
राष्ट्रिय फुटबल टिमका हरेक खेलाडीलाई सकारले ५ लाख पुरस्कार दिने
६९ अङ्कभन्दा धेरैले घटेर शेयर बजार राताम्मे, झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँको कारोबार
यस्तै अवस्था रहे ‘गरिब’ले अब चुनाबमा प्रतिपस्पर्धा गर्न सक्लान ?
शंकर पोखरेलले रोक्न खोजको टरिगाँउ एयरपोर्ट बिस्तार जनार्दशन शर्माले अघि बढाउलान ?
पत्रकार खेमराज रिजालले दिउँसै देखेको सपना